क्यानाडा: जनसंख्याको राष्ट्रिय संरचना। क्यानाडा मा युक्रेनी प्रवासी। क्यानाडा को मान्छे
यो राज्य आप्रवासी धेरै आकर्षक छ, त्यसैले क्यानाडा को मानिसहरूले विविधता द्वारा विशेषता छन्। धेरै अर्थमा यो प्रवासिहरु जीवन उच्च गुणस्तर, शैक्षिक प्रणाली, पर्यावरण अवस्था र उच्च सामाजिक विकास अन्य कारक को आगमन कारण हो। क्यानाडा मा सबै भन्दा ठूलो diasporas एक युक्रेनी र रूसी छन्।
को आदिवासी जनसंख्या
सरकार को आधुनिक जातीय संरचना यसको इतिहास भर गठन। पहिले यो यूरोप द्वारा colonized थियो क्यानाडा को पहिलो बासिन्दाहरू राज्य इलाका Inhabited। आर्कटिक कोस्ट मा एस्किमोनेबुला कुल बस्थे। तर देश को थोक इंडियन्स द्वारा Inhabited थियो। निवास कुल क्षेत्र आधारमा यसको नाम थियो। पश्चिमी र उत्तर-पश्चिमी मुलुकमा वसोवास Athabascan कुल, को Tlingit र Haida थिए। तिनीहरूले सबै एउटै भाषा परिवार, को ना-Dene भनिन्थ्यो जो एकताबद्ध।
अल्गनक्विन vakashskaya - ठ्याक्कै देश को विपरीत अन्त अर्को परिवार छ। यो क्री, Naskapi र Montagnais समावेश। पश्चिमी भाग selishi, Nootka र kvakiyutl Inhabited। परिवार Hoka-Siouan जातिहरू सिअक्स, Iroquois, ह्युरोन समावेश। निवास स्थान ढाकिएको आधुनिक क्यानाडा को दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रहरूमा।
यसरी, कुल को सेट र क्यानाडा को देश थियो। जनसंख्याको राष्ट्रिय संरचना फरक परिवार थियो। सदस्यहरु को कुल संख्या दुई सय र बीस हजार मान्छे बराबर। को कुल को मुख्य व्यवसायों शिकार थिए, माछा मार्ने र खेती।
ठूलो भौगोलिक आविष्कारहरू एक युग परिवर्तन र क्यानाडा छ। जनसंख्याको राष्ट्रिय संरचना कारण उपनिवेशवाद प्रक्रिया एकदम परिवर्तन भएको छ। युरोपेली नागरिकहरु व्यापक उत्तर अमेरिकी भूमि भर। र सोह्रौं देखि विदेशी आगंतुकों बीच सत्रौँ शताब्दीमा गर्न अवधि मा अंग्रेजी र स्कट्स प्रभुत्व। त्यसपछि फाइदा फ्रान्सेली हस्तान्तरण गरिएको थियो। क्यानाडा मा यो संग सामूहिक फ्रान्सेली क्यानाडा बासिन्दा एन देखा पर्न थाले। तर एकै समयमा, यस आदिवासी जनसंख्याको नकारात्मक प्रभाव उपनिवेशवाद। को आप्रवासी तिनीहरूलाई रोग, रक्सी, हातहतियारको ल्याए किनभने प्राकृतिक वृद्धि, धेरै कम थियो। को कुल को प्रतिनिधिहरु मारिए जसमा स्थिर skirmishes असामान्य थिएनन्।
पछि वर्ष मा, यो प्रवृत्ति जारी हुनेछ। को रूपमा colonizers संख्या एकै समयमा भयो आदिवासी मान्छे कम र कम भयो। उनको संख्या यस क्षेत्रको लागि एक विशेष आरक्षित मा दबावपूर्ण मान्छे सार्न प्रयास जो हालसालै minted सरकारको नीति, प्रभावित कम गर्न।
जनसंख्याको आधुनिक संरचना
क्षणमा, राज्य को जातीय संरचना सबै दुनिया भर देखि प्रवासिहरु को एक मिश्रित छ। तापनि जनसंख्याको घनत्व धेरै कम छ, तर आफूलाई मानिसहरूले विविधता र संस्कृतिका अनुपम मिश्रण द्वारा विशेषता छन्। इलाका शान्तिमा तीस-चार जातीय समूह रह देखि रेखाहरू Interweaving, धेरै असामान्य छ। तिनीहरूलाई को भन्दा को आकार सय भन्दा बढी एक हजार मान्छे छैन। तथापि, त्यहाँ प्रवासी ती हुन्, प्रतिनिधि जो त्यहाँ अधिक एक लाख छन्।
निस्सन्देह, राज्य को क्षेत्रमा बस्ने सबैभन्दा धेरै nationalities, क्यानाडा छन्। तर यदि तपाईं ऐतिहासिक घटक देखो, तिनीहरूलाई को भन्दा आप्रवासी को सन्तानहरू छन्। तथापि, तिनीहरू क्यानाडा रूपमा पहिचान।
विभिन्न nationalities को प्रतिनिधिहरु र क्यानाडा विशेषता छ। जनसंख्याको राष्ट्रिय संरचना कारण धेरै diasporas गर्न अत्यन्तै विविध छ।
अलग देखिने अल्पसंख्यकों तथाकथित फेंकना। यो अवधारणा अन्तर्गत ती बासिन्दा हुन् युरोपेली दौड प्रतिनिधिको प्राप्त, तर आफ्नो पुर्खाहरूको निवासी थिएनन्। यो समूह क्यानाडा जस्ता देश को जनसंख्याको एक पाँचौं लागि खाताहरू। जनसंख्याको राष्ट्रिय संरचना एक अद्वितीय स्वाद "देखिने अल्पसंख्यकों", जो दक्षिण एशिया, चीन, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका देखि आप्रवासी समावेश को प्रतिनिधिहरु कारण छ। पनि यस श्रेणीका Filipinos र अरब छन्। ओन्टारियो र अल्बर्टा मा "देखिने अल्पसंख्यकों" को उच्चतम एकाग्रता।
आदिवासी मान्छे को सानो समूह क्यानाडा को पहिलो बासिन्दाहरू भनिन्छ। त्यहाँ करिब आधा एक लाख छन्, तर आज तिनीहरू कुल जनसंख्याको पाँच मात्र प्रतिशत बनाउन।
युक्रेनी प्रवासी को उद्भव
क्यानाडा मा युक्रेनी प्रवासी र सबैभन्दा धेरै मध्ये एक छ। यो कारण यो लोकतान्त्रिक राज्य मा यूक्रेनियन नेतृत्व जो आनन्द को खोज छ, थियो। को आप्रवासी को सबै भन्दा आफ्नो परिवारको खुवाउन सक्षम हुन आफ्नो भूमि छोड्न बाध्य भए। मुख्यतया भूमि को खेती मा लगी भएको छ जो देश, को पश्चिमी भाग देखि सार्नु। ल्याउन गर्दैन घरमा यो काम राम्रो हुनेछ भन्ने कुरा छ, तर कम से कम केही आय। पहिलो, युक्रेन बाट ू गर्न विदेशी गलिशिआ देखि छ परिवार थिए आनाकानी गरेनन्। तिनीहरूले सय बीस वर्ष पहिले आफ्नो countrymen क्यानाडा बाटो खुलेको छ।
अर्को देश, कम्युनिस्ट शासन द्वारा तिनीहरूले त्यसपछि पोल्याण्ड देखि दबाब थिए सार्दा थियो पश्चिमी युक्रेन को मान्छे धेरै तातो छन् लागि, त्यसपछि। केही मानिसहरू लागि, क्यानाडा एउटा भिसा एक सामान्य जीवन को लागि अन्तिम मौका थियो। आप्रवासी सागर को Stalinist दमन देखि भाग्न प्रयास।
अध्यागमन को दोस्रो लहर सोभियत पतन पछि थाले। समय को भर्खरै गठन देशहरूमा लागि कठिन समयमा, धेरै बासिन्दा विदेश राम्रो जीवनको खोजीमा सरेको छ। आप्रवासी यस प्रवाह को एक विशिष्ट सुविधा लक्ष्य थियो। पहिले मान्छे भाग्न प्रयास भने, तिनीहरू अब जीवन स्थितिहरु को गुणवत्ता संग नयाँ घर छानेर छन्। क्यानाडा प्रवासिहरु लागि आफ्नो वफादार सार्वजनिक नीति को आप्रवासी आकर्षित। विशेष गरी, यो खाली प्रतिज्ञा थियो। को नोव्यू राम्रो चिकित्सा हेरविचार, शैक्षिक र रोजगारीका सहायताको वसोवास प्रदान गर्न अधिकारीहरु। मानिसहरू आफ्नो छोराछोरीको लागि खुशी भविष्य सुनिश्चित गर्न अविश्वसनीय दूरी हटाउन।
आधुनिक जीवन युक्रेनी आप्रवासी
क्षणमा, युक्रेनी वंश को क्यानाडा अल्बर्टा, सस्केचेवान र Manitoba मा मुख्य रूप बाँचिरहेका छौं। यी प्रान्तहरू लोकप्रिय दोस्रो युक्रेन रूपमा उल्लेख। त्यहाँ जनसंख्या एक स्थिर वृद्धि भएको छ। 2000 देखि, कुल यी प्रान्तहरू मा बासिन्दा संख्या 138 हजार मान्छे वृद्धि भएको छ। यो सकारात्मक जनसंख्या गतिशीलता जो सरलीकृत modalities गर्न सुत्ने र यात्रा भिसा रू को सम्बन्धित सरकारी नीति, द्वारा प्रदान।
क्यानाडा अधिकारीहरूले परिवार र साथीहरूसँग आफ्नो जडान सुनिश्चित गर्न युक्रेनी सीमाना पार unhindered अनुमति दिन्छ। यो पनि राज्य को पर्यटन उद्योग लागि राम्रो छ।
अब राज्य पनि अधिक ध्यान दिएर बाहिर यूक्रेनियन लागि प्रविष्टि मुक्त गर्न निर्णय लाग्यो। सामाजिक लाभ, स्वास्थ्य बीमा र रोजगार को अवसर स्थायी निवास, पहुँच को दर्ता लागि दर्ता सम्बन्धित छन् केही प्राविधिक मुद्दाहरूको समायोजन जाँदै।
क्यानाडा मा यूक्रेनियन नियुक्ति
क्यानाडा मा युक्रेनी प्रवासी धेरै राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ, त्यसपछि, क्रमशः, आप्रवासी गतिविधि विभिन्न क्षेत्रहरू मा कार्यरत छन्। ती पर्यटकहरूलाई दिइएको मूलतः प्रतिष्ठित काम अर्को देशमा आफ्नो जीवन पूर्व-योजना। पहिलो चरण रोजगार गर्ने अधिकार दिन्छ कि एक विशेष भिसा जारी छ। तर कागजात मात्र कर्मचारी निमन्त्रणा संग हुन सक्छ प्राप्त गर्न। अर्को विकल्प तपाईं पनि एक अनुकूल स्थिति प्राप्त गर्न सक्छन् जो एक संघीय कार्यक्रम छ। प्रारम्भिक चरण मा प्रवासी आफ्ना सँगी मद्दत गर्छ।
पूर्व युक्रेनी नागरिक खुसीसाथ यस्तो खानपान, चिकित्सा, साथै विशेष सेवाहरू क्षेत्रमा काम गर्न स्वीकार। सारा महाराज, नर्स, डाक्टर, varschiki, Carpenters, Plumbers र Electricians - व्यवसायीक सबैतिर आवश्यक छ।
तर के भाषा क्यानाडा - यस्तो विविध जातीय संरचना संग एक देश? यस प्रश्नको जवाफ अद्वितीय हुन सक्दैन। देश धेरै बहुराष्ट्रीय भएकोले प्रत्येक प्रवासी आफ्नै को कुरा ल्याएको छ। पनि लामो ऐतिहासिक मातृभूमि बाँकी भएकाहरूलाई यूक्रेनियन, सम्झना र आफ्नो भाषा आदर। क्षणमा, क्यानाडा युक्रेन देखि एक लाख भन्दा बढी आप्रवासी घर छ। र यो केवल यो देशमा स्थायी निवास गर्नेहरूलाई छ।
यस प्रवासी अधिकांश सक्रिय राष्ट्रिय संस्कृति विकास समर्थन। हरेक युक्रेनी घर अझै पनि एक समय मा जस्तै एक पटक हो त्यो पुरानो परम्परा र भन्सार, जेनेरेसन गर्न जेनेरेसन बाट पारित बाँचिरहेका छौं। यो पहिचान उनको सन्तानहरू पहिलो आप्रवासी को वर्ष मार्फत लगे गरिएको छ। क्यानाडा मा यो धेरै संग्रहालयहरु युक्रेनी संस्कृति समर्पित छ। धेरै निरन्तर परम्परागत शिल्प देखाउन भनेर विभिन्न चाडहरूमा संगठित। सबै भन्दा प्रसिद्ध संग्रहालय-गाउँमा "युक्रेनी सम्पदा" छ।
किनभने धेरै वर्ष पहिले, विभिन्न लेखकहरूले र कवि अध्यागमन मा काम विदेशहरुमा युक्रेनी संस्कृति को सक्रिय विकास, अचम्मको छैन। हेलेना Teligi र ओलेग Olzhicha कामहरू क्यानाडा र युक्रेनमा दुवै ज्ञात।
यसलाई दुई चरणमा गठन भएको थियो जो रूसी समुदाय, को मानिसहरूका बिना क्यानाडा कल्पना गर्न असम्भव छ:
आप्रवासी पहिलो लहर तथाकथित अध्यागमन हार्बिन द्वारा विशेषता छ। यी चिनियाँ भूमि बाँकी छ जो मानिसहरू हुन्। आफ्नो कदम कारण समाज को संरचना बेग्लाबेग्लै दृष्टिकोण छन्। प्रवासिहरु समाजवाद को प्रबल विरोधीहरूले, को राजतन्त्र थप इच्छुक थिए।
दोस्रो लहर को शिखर सत्तर र अन्तिम शताब्दीको eighties आउनुभयो। मान्छे को प्रवाह पूंजीवाद को प्रकारको भाग्न हतारिएको। यी आप्रवासी, यसको विपरीत, आफ्नो मातृभूमि आफ्नो चिन्तित मनोवृत्तिले विशेषता छन्।
कुनै कुरा के रूस तिनीहरूले राजनीतिक दृष्टिकोण र प्राथमिकताहरू छ जो क्यानाडा, थिए कारण को लागि, प्रवासी सबै compatriots मद्दत गर्छ। मूलतः रूस देखि मान्छे को conglomerations अर्थोडक्स चर्च छन्। प्राय त्यहाँ पनि धार्मिक उद्देश्यका लागि, तर केवल आफ्नो समकक्षों संग कुराकानी गर्न जाँदैछन् छैन भन्दा।
त्यो र क्यानाडा बस्न कसरी, रूसी, एक विशेष समुदाय शीघ्र सक्नुहुन्छ तिनीहरूले के। तिनीहरूले पनि कानुनी सहायता प्रदान विदेश मा बसोबास गर्न मद्दत गर्छ। समुदाय पनि मान्छे र्याली र एकाकीपनको तिनीहरूलाई रक्षा गर्न प्रयास गर्न प्रतिबद्ध छन्। यी समावेश:
"क्यानाडा मा समुदाय रूसी भाषा बोल्ने";
"रूसी मानवीय हाउस"।
सार्दा अघि धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ क्यानाडा केही भाषा, कि के मान्छे को प्रकारको। पहिलो पटक, आप्रवासी अनुसार सुहागरात जस्तो। अरू सबै कुरा जस्तै मानिस सबै admires। तर त्यसपछि आप्रवासी उहाँले जीवनको लागि बसोबास पर्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ खरानी दिन आउँछ। वयस्क काम पाउन आवश्यक र छोराछोरी स्कूल जाने। तर केही समय पछि, परिवार छाँटकाँट र जीवनको नयाँ तरिका मा आएको।
खराब - यो अफ्रीका मा मानिसहरूको
पर्म: उत्तर चिहान - युरोप मा सबै भन्दा ठूलो cemeteries एक
कार VAZ-2171। VAZ-2171: तस्बिर, समीक्षाहरू, प्राविधिक विवरणहरू
को बुफे तालिका र मात्र skewers मा व्यञ्जनहरु appetizers
पुराना ओस्टियोआर्थराइटिस - यो के हो? पुराना ओस्टियोआर्थराइटिस 2, ग्रेड 3: उपचार
सबै भन्दा राम्रो के कार्यक्रम PDF फाइलहरू खोल्न सक्छ?
Kefir संग केक
Senya गर्ने हो? पूरा नाम र एक संक्षिप्त विवरण यसको
होटल "Arcadia" (सोची): समीक्षा र पर्यटक फोटो
मास्को मा एक क्लब मा नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या - सही समाधान!